လူမီနီယံလျှောတံခါးကိုစျေးနှုန်းများ -- fscyal.com
စီးရီးကိုရွေးချယ်ခြင်းပြတင်းပေါက်အပေါက်၏အရွယ်အစားနှင့်ဒေသတွင်းလေဖိအားတန်ဖိုးပေါ်အခြေခံသင့်သည်. အဆိုပါအရံလသာဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုလူမီနီယံအလွိုင်းလျှောပြတင်းပေါက်ထက်လျော့နည်းမဖြစ်သင့်ပါတယ် 70 စီးရီး.
Changyuan လူမီနီယမ်အလွိုင်းသတ္တုစပ်လျှောတံခါး&ပြတင်းပေါက်များကိုအလူမီနီယမ်အလွိုင်းအဆောက်အအုံ profile များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်. ၎င်းတို့ကိုသာမာန်လူမီနီယံအလွိုင်းတံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များနှင့်ကျိုးပဲ့နေသောတံတားလူမီနီယမ်အလွိုင်းတံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များအဖြစ်ခွဲထားသည်. လူမီနီယမ်အလွိုင်းပြတင်းပေါက်များလှပသောဖြစ်ကြသည်, တံဆိပ်ခတ်သည်, နှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုမြင့်. သူတို့ကကျယ်ပြန့်ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာ၏လယ်ပြင်တွင်အသုံးပြုကြသည်. အိမ်တိုးတက်မှုအတွက်, အလူမီနီယမ်အလွိုင်းတံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များကိုမကြာခဏ balconies များကိုထုပ်ပိုးရန်အသုံးပြုကြသည်. ခါးပတ်ဘောင်သည်ကြီးမားပြီးဖန်ကြီးမားသောwithရိယာနှင့်ဖုံးအုပ်နိုင်သည်, ဒါဆိုမိုးလုံလေလုံအလင်းကတောက်ပတယ်. အလူမီနီယမ်အလွိုင်းကိုယ်တိုင်ကိုထုတ်ယူရန်လွယ်ကူသည်, ပရိုဖိုင်း၏လက်ဝါးကပ်တိုင်အပိုင်းတိကျသည်, နှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့တိကျမှန်ကန်မှုကိုမြင့်မားသည်. ထို့ကြောင့်, ပိုင်ရှင်များစွာသည်အလှဆင်ရာတွင်အလူမီနီယမ်အလွိုင်းတံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များကိုအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်ကြသည်. ChangYuan Aluminum တွင်အလူမီနီယမ်အလွိုင်းတံခါးလျှောတံခါးနှစ်မျိုးရှိပါသည်: 70 စီးရီး 90 စီးရီး. The 70 စီးရီးများကိုအိမ်ထဲရှိလူမီနီယံအလွိုင်းလျှောတံခါးများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်. အခန်းနံပါတ်သည်တံခါးဘောင်အထူ၏မီလီမီတာအရေအတွက်ကိုဖော်ပြသည်. လူမီနီယံအလွိုင်းလေးမျိုးလျှောပြတင်းပေါက်လေးမျိုးရှိပါတယ်: 55 စီးရီး, 60 စီးရီး, 70 စီးရီး, နှင့် 90 စီးရီး. စီးရီးကိုရွေးချယ်ခြင်းပြတင်းပေါက်အပေါက်၏အရွယ်အစားနှင့်ဒေသတွင်းလေဖိအားတန်ဖိုးပေါ်အခြေခံသင့်သည်. အဆိုပါအရံလသာဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုလူမီနီယံအလွိုင်းလျှောပြတင်းပေါက်ထက်လျော့နည်းမဖြစ်သင့်ပါတယ် 70 စီးရီး.
ChangYuan လူမီနီယံလျှောတံခါး & window အားသာချက်များ:
1). မိုးလုံလေလုံအာကာသသိမ်းပိုက်မဟုတ်ပါဘူး, လှပသောအသွင်အပြင်, ချွေတာစျေးနှုန်း, နှင့်ပိုကောင်းတံဆိပ်ခတ်.
2). အဆင့်မြင့်ဆလိုက်ရထားလမ်းကိုချမှတ်ပါ, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖွင့်လှစ်ရန်ညင်ညင်သာသာကတွန်း.
3). ဖန်၏ကြီးမားသောအပိုင်းအစနှင့်အတူဒွန်တွဲ, ဒါကြောင့်မိုးလုံလေလုံအလင်းရောင်တိုးပွါးမသာ, ဒါပေမယ့်လည်းအဆောက်အ ဦး ၏ခြုံငုံအသွင်အပြင်တိုးတက်ကောင်းမွန်.
ကျိုးပဲ့နေသောတံတားအလူမီနီယံအလွိုင်းအပူလျှပ်ကာတံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များ၏ထူးခြားသောကောင်းကျိုးများမှာပေါ့ပါးသည်, မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိကို, ကောင်းမွန်သောရေနှင့်လေထုတင်းကျပ်စွာ, ကောင်းသောမီးခံနိုင်ရည်, ကြီးမားသောအလင်းမျက်နှာပြင်, လေထုချေးခုခံ, ရှည်လျားသောဝန်ဆောင်မှုဘဝ, ကောင်းသောအလှဆင်အကျိုးသက်ရောက်မှု, နှင့်ကောင်းမွန်သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်.
လူမီနီယမ်လျှောတံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များသည်မိုးလုံလေလုံရာနေရာများကိုပိုမိုချွေတာနိုင်သည်. တံခါးဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ချိန်တွင်၎င်းသည်နံရံတွင်တုန်ခါမှုနည်းသည်. အခန်းငယ်များနှင့်ပါးလွှာသောအခန်းကန့်များရှိသောအခန်းများအတွက် ပို၍ သင့်တော်သည်. မိုးလုံလေလုံပြတင်းပေါက်များလျှောပြတင်းပေါက်များအတွက်ပိုမိုသင့်လျော်သည်.
Q1. မင်းဟာကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလား၊ စက်ရုံလား?
Q3 : ငွေပေးချေမှုသက်တမ်းကဘာလဲ?
ကျွန်ုပ်တို့သည် TT ကိုသာလက်ခံပါလိမ့်မည်. 30%အပ်ငွေနှင့် 70% beforrshipping ပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်ချက်ဆန့်ကျင်ချိန်ခွင်လျှာ.
အမှတ်အသားများ (Tags)：လူမီနီယံလျှောတံခါးကို, လူမီနီယံလျှောတံခါးကို&ပြတင်းပေါက်, လူမီနီယံလျှောတံခါးကို&window ထုတ်လုပ်သူ, လူမီနီယံလျှောတံခါးကို&ပြတင်းပေါက်ပေးသွင်း, လူမီနီယံလျှောပြတင်းပေါက်, လူမီနီယံပရိုဖိုင်းကို